သင့် Facebook Page/ Blog / Wordpress နှင့် အခြား Website များမှ ၀င်ငွေရှာနိုင်မည့်အခွင့်အရေး - အောင်အောင်ဆွေ Blog
သင့် Facebook Page/ Blog / Wordpress နှင့် အခြား Website များမှ ၀င်ငွေရှာနိုင်မည့်အခွင့်အရေး သင့် Facebook Page/ Blog / Wordpress နှင့် အခြား Website များမှ ၀င်ငွေရှာနိုင်မည့်အခွင့်အရေး Aung Aung Swe
သင့် Facebook Page/ Blog / Wordpress နှင့် အခြား Website များမှ ၀င်ငွေရှာနိုင်မည့်အခွင့်အရေး ၁ - သင့်ကိုယ်ပိုင် Page/ Blog / Wordpress နဲ့ အခြား Website တို့ မှာ တစ်ရက်အတွင်းလူထောင်သောင်းချီဝင်ကြည့်နေကြပြီဆိုရင် သင်ဝင်ငွေရှာဖို့အကောင်းဆုံးအခြေအနေကိုရောက်နေပါပြီ ။ယခုလက်ရှိ မြန်မာ Developer တွေ အသုံးပြုနေတဲ့ Bidvertiser , Adfly တို့ဟာ
Payrate အနည်းဆုံးဆိုတာကို သင်သိပါသလား။ ဒီလိုအနေအထားသင့်မှာ ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် AndroiTech နဲ့ ဆက်သွယ်လိုက်ရင် သင်မျှော်မှန်းထားတဲ့ ၀င်ငွေတစ်ခုကို လအနည်းငယ်တွင်းရရှိလာနိုင်ပါတယ် ။ မည်သည့်ငွေကြေးထည့်သွင်းမှု ၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှ ပြုလုပ်ရန်မလိုပါ ။ ၂ - သင့်ကိုယ်ပိုင် Page/ Blog / Wordpress နဲ့ အခြား Website တွေကို Android Apk အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုပါသလား ။ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ဖုန်းလောကထဲကို သင့်
Post တွေပေးချင်တယ် ၊ ဖုန်းအတွက် Apk လေးတစ်ခုလောက်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ နဲ့ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ ။ Free Of Charge ဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ် ။ ၃ - Android Developer တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရော ၊ Blogger အနေနဲ့ ရော ၊ Page ပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ ရော .. မိမိပိုင်ဆိုင်မှု ၊ ကျွမ်းကျင်မှုကနေ ၀င်ငွေရှာလိုပါသလား ၊ ကျွန်တော်တို့ နဲ့အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှ Developer ၊ Blogger နှင့် အခြား Page ပိုင်ရှင်များအတွက် ၀င်ငွေရရှိနိုင်စေရန် သီးသန့် ဆောင်ရွက်ပေးနေသော Team ဖြစ်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ Service ဟာ IT နယ်ပယ်မှ မြန်မာများ အဆင်ပြေဖို့ အတွက် ရည်ရွယ်ထားသလို ၊ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ PayRate ဟာလည်း သင့်ကိုအမြဲတမ်း ပြုံးပျော်ရွှင်စေဖို့စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ Andro iTech နှင့် ပူးပေါင်းပြီး ၀င်ငွေရှာလိုတယ်ဆိုရင် အခုပဲ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ ။ သင့်ကို နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုအကြံပေးဖို့အသင့်ရှိနေပါတယ်
... Welcome to Androitech Innovation World ! ဆက်သွယ်ရန် - androitechservices@gmail.com https://www.facebook.com/pages/Androitech-Group/650158545027787 https://www.facebook.com/aungaungswe1990 http://www.myanmarappstore.com/
သင့် Facebook Page/ Blog / Wordpress နှင့် အခြား Website များမှ ၀င်ငွေရှာနိုင်မည့်အခွင့်အရေး Reviewed by Aung Aung Swe